होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितले खाना र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
बिहिबार, बैशाख ३०, २०७८ Thursday 13th May 2021
होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितले खाना र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
मुलुकमा कोरोना अनियन्त्रित हुँदैछ । दैनिक हजारबढी संक्रमितको संख्या थपिएसँगै सरकारले समेत केही गतिविधिमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सुरु गरेको छ । संक्रमितको लागि स्वास्थ्य संस्थामा क्षमता अभावको विषयमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ । गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि अस्पतालको अभावले होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तर घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूले कस्तो कुरामा ध्यान दिने रु
चिकित्सकहरू गम्भीर समस्या देखिएका बाहेक लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई समेत घरमै आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिन्छन् । घरमै बस्दा खाना र सुरक्षाको बारेमा राम्रो ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
भिटामिन सी र जिंकको अहं भूमिका
कोरोनाको समयमा धेरै बिरामीहरूलाई खाने र पिउने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । धेरै खाना बार्नु हुँदैन । तर यो भने महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं पौष्टिक खाना खाने र सकेसम्म घर बाहिर बनेको खानेकुराबाट टाढा रहनुहोस् । कोभिडको समयमा शरीरका लागि भिटामिन सी र जिंक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । औषधिको साथसाथै यसलाई प्राकृतिक स्रोतबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । जस्तो सुन्तला, निम्बु, अण्डा र केरा प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्।
दिनचर्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ
कोरोना पोजिटिभ एउटा सामान्य लक्षण हो । यसमा शरीर थाकेको महसुस हुन्छ। जसका कारण धेरै बिरामीहरू आफ्ना अधिकांश समय ओछ्यानमा सुतेर बिताउने गर्छन् । घर क्वारेन्टिनमा नियमित बनाउनुहोस्, बिहान सबेरै उठ्नुहोस् र हल्का व्यायाम गर्नुहोस्, कोठामा हिँडडुल गर्नुहोस् र शरीरलाई फिट राख्नुहोस् । खाजापछि आराम गर्नुहोस्, बेलुका तपाईं हिँड्न वा पुस्तक पढ्न सक्नुहुनेछ । राति १० बजेसम्म सुत्ने प्रयास गर्नुहोस् । पूरा दिनको तालिका मिलाउनुहोस् । यससँग तपाईं आफ्नै लागि समय पाउनुहुनेछ र तपाईंको दिमाग पनि व्यस्त रहनेछ ।
तापक्रम र अक्सिजनको स्तर नाप्नुहोस्
कोरोना भाइरसले तपाईंको फोक्सो र श्वासप्रश्वासको पथलाई सबैभन्दा धेरै नोक्सानी पुर्‍याउँछ । यसैले बाफ लिनु आवश्यक छ । दिनमा ३–४ पटक तातो पानीले बाफ लिनुहोस् । यदि तपाईंसँग स्टिमर छैन भने जुनसुकै भाँडामा पानी तताएर पनि बाफ लिन सकिन्छ ।
समय समयमा तापक्रम जाँच गर्दै गर्नुहोस् । भाइरसले यसको दायरा विस्तार गर्न सक्छ । यदि तपाईंलाई ज्वरो आएको छ भने तुरुन्तै डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । तपाईंको अक्सिजन र नाडीको स्तर जाँच गर्नुहोस् । दिनमा ४र५ पटक पल्स लेभल जाँच गर्नुहोस् । यदि तपाईंलाई अक्सिजनको स्तर कम हुँदैछ जस्तो लाग्छ भने चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नुहोस् र तुरुन्त अस्पताल जानुहोस् ।
परिवार र आफन्तलाई संक्रमणबाट जोगाउने उपाय
यदि तपाईं घरमा हुनुहुन्छ भने यो कुरा ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं आफैं संक्रमणको दायरामा आउनुहुन्न। त्यसैले यी चीजहरूको विशेष ख्याल राख्नुहोस् –
(प्रायस् तपाईंको कोठाको ढोका बन्द राख्नुहोस् ।
(खाना दिन आउने बेलामा बच्चा र वृद्धहरू भन्दा पनि उमेरदार मान्छेलाई खाना दिन बोलाउनुहोस् ।
(खाना खाइसकेपछि भाँडा माझ्नुहोस् र सरसफाइ गर्नुहोस् ।
– सकेसम्म मान्छेसँग दुरी बनाएर कुरा गर्नुहोस् ।
– अर्को १४ दिनको लागि ३‍(४ जोडी कपडा लिनुहोस् र दराज त्यतिबेलासम्मको लागि बन्द गर्नुहोस् ।
– प्रयोग गरिएको मास्कलाई सेनिटाइज गर्नुहोस् र यसलाई पोलिथिनमा राख्नुहोस् । १४ दिनपछि त्यसलाईसँगै डिस्पोज गर्नुहोस् ।
– कोरोनामुक्त भएपछि पूरै कोठालाई सेनिटाइज गर्नुहोस् । प्रयोग गरिएको तौलिया र अन्य कपडा धुनुहोस् र तिनीहरूलाई घाममा सुकाउनुहोस् ।
(१४ दिनपछि चिकित्सकको सल्लाहमा परिवारका सदस्यलाई भेट्ने र पुरानै दैनिकीमा फर्किन सक्नुहुनेछ। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि बीचबाट पुनस् प्राप्त गर्नुको मतलब तपाईं आराम गर्नुहुन्न।
कोरोना संक्रमितका लागी यस्तो अवस्थामा घरकै आइसोलेसन राम्रो
कोरोना संक्रमितलाई सास फेर्न समस्या भएमा यसरी सावधानी अपनाउनुहोस्
बद्लिदो मौसममा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ५ गल्ती, स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ यस्ता असर
के तपाईलाई बर्गर मन पर्छ ? बिचार गर्नुहोस् लाग्नसक्छ यस्ता गम्भीर रोग
के तपाईको कान दुख्ने समस्या छ ? यस्ता छन् घरेलु उपचार
यस्ता छन् अंगुर खाँदा शरीरलाई हुने १३ भन्दा बढि फाइदा